मेरो नियत खराब छैन, बैंकले चाँडो निर्णय गर्दिए उद्योग चलाएरै ऋण तिर्छुः चण्डीराज ढकाल (भिडियोसहित) – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७६ चैत १० गते १३:४१ मा प्रकाशित
कुनैबेला गार्मेन्ट निर्यात गरी सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याएर धेरै वर्षसम्म सरकारबाट सम्मान पाएका व्यवसायी चण्डीराज ढकाल अहिले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचिमा छन् । विगत ३ वर्षदेखि ढकालले आफ्नो डुबेको उद्योग मोमेन्टोमा विदेशी लगानी ल्याएर फेरि चलाउने बताउँदै आएका छन् । पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा उनले यस्तै प्रस्ताव पठाएका छन् । अब बैंकले ऋणी असूलीको कानूनी प्रक्रिया शुरु गर्ने भनिसकेको छ । तर ढकाल भने बैंकले समयमै निर्णय नगरेका कारण आफूलाई अफ्ठेरो भएको बताउँछन् । ढकाल कसरी व्यवसायमा असफल भए ? अबको निकास के ? र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपमाथि केन्द्रित रहेको क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले ढकालसँग गरेको कुराकानीः
चण्डीराज ढकाल भन्नेवित्तिकै बैंकको ऋण नतिरेर कलोसूचीमा परेको व्यवसायीको रुपमा चिनिन्छ । तपाईंको नियत नै ऋण नतिर्ने हो ?
मैले साँच्चिकै ऋण नतिर्ने सोचाइ बनाएको भए यहाँ बस्नुपर्ने नै थिएन । जब मेरो उद्योग बन्द भयो मैले विभिन्न बैंकको करिब २ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेको छु । एनसीसी बैंक, एनबी बैंक र लुम्बिनी बैंकमा गएर सोधे हुन्छ ।
म आफू बसेको घर, अफिस बेचेर बैंकको ऋण तिरेको छु । सितापाइलामा कुनै जमानामा सबैभन्दा राम्रो र ठूलो घर मेरो थियो । बैंकको ऋण तिर्न त्यो पनि बेचेँ । आज त्यसको मूल्यांकन १ अर्ब रुपैयाँ छ । मेरो पहिलो उद्देश्य भनेको यो उद्योग जसरी भए पनि चलाउने हो । त्यो उद्योगबाट जति गुमाएँ, त्यसलाई रिकोभर गरेर पुनः उद्योगलाई उचाईमा पुर्याउने छ ।
मसँग कति सम्पत्ति छ । मैले सम्पत्ति नबेचेर राखेको भए अहिले त्यसको १० प्रतिशतले सबै ऋण सकिने थियो । म उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष भएको हुँदा १० करोड आउने सम्पत्ति ६/७ करोडमा बिक्री गरेको छु । आजको दिनमा मेरो ऋण वाणिज्य बैंकमा मात्र हो । नतिर्ने नियत भएको भए कसैको पनि तिर्दिनथेँ होला नि होइन र ?
एउटा सामान्य व्यक्तिले तपाईंको जस्तै बैंकको ऋण नतिरेको भए जेल परिसकेको हुन्थ्यो । तपाईं त यति लामो समयसम्म ऋण नतिर्दा पनि खुलमखुल्ला हिँडिरहनु भएको छ । कति शक्तिशाली है तपाईं ?
यो गलत भनाइ हो । चण्डीराज ढकालले अब वाणिज्य बैंकको मात्र ऋण तिर्न बाँकी छ । चण्डी ढकालले मेसिन त बेचेर खाएको छैन नि । बैंकिङ व्यवस्थापनमा बसेको व्यक्तिले यो कुरा बुझेको छ । मैले ल्याएको लगानीकर्ता जानकारी लिन अहिले गुगलबाट सकिन्छ । कोही व्यक्ति लगानी गर्न त्यसै त आएको छैन ।
तपाईंले ऋण तिर्नभन्दा पनि मिनाहा गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शक्ति हदैसम्म प्रयोग गर्नुभयो भन्ने आरोप छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा महासंघको शक्तिको प्रयोग गर्न मिल्छ र ?
अरु ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई खोज्नुपर्छ । म आफू नै बैंक खोज्दै जान्छु । नेपालमा धेरै मान्छेको बुझाइ नकारात्मक रुपमा सोच्ने भएर हो । उद्योग चलाउने भएपछि सुविधा माग्नुपर्यो । होइन भने नगए पनि भयो । उच्च व्यवस्थापकसँग सहमतिमा नै अगाडि बढेको छु । मेरो उहाँहरुबीच सिरियस छलफल नभएको भए मलाई मुद्दा लगाउन सक्ने थिए ।
हाम्रो प्रश्नको जवाफ आएन नि ? प्रष्ट भन्दिनुहोस् न ।
चण्डीराज ढकाल आफैं अध्यक्ष हुँदा त महासंघलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरेन । मलाई त्यो बेला मन्त्री र सचिवले भनेका थिए- तपाईंको आफ्नो समस्याको बारेमा भन्नुहोस् भनेर । मैले आफ्नो समस्या कहिल्यै पनि राखिन । न मैले महासंघको कुनै स्रोतको नै प्रयोग गरेको छु । न यसलाई दुरुपयोग गरेको छु । त्यसैले मैले अरुलाई गाली गर्न सक्छु । मेरो समस्या सल्टाउन को व्यक्ति गएको छ ? पशुपति, शेखर, भवानी र सुरज जसलाई सोधे पनि हुन्छ ।
तर, सुरज वैद्यको पालामा उहाँले यो समस्या सल्ट्याउन पहल गर्नु भएको थियो । तपाईंले नै मान्नु भएन नि ?
सुरजजीले आफ्नो समस्या त सल्ट्याउन सक्नु भएन मेरो कसरी सक्नुहुन्थ्यो ? चिनेको व्यक्ति संचालक छ भनेपछि कुरा गर्न भनेको होला । तर, त्यो लेभलमा कुरा अगाडि बढेको थिएन ।
तपाईंको राजनीतिक पुष्ठभूमि कम्युनिष्ट होइन । अहिले देशमा बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार छ । यो सरकारले ऋण तिर्न तीब्र दबाब दिएका कारण डराएर तपाईंले ऋण तिर्ने प्रयास गर्नु भन्ने चर्चा छ नि ?
मलाई हिँजो पनि सरकारले पेलेको थिएन । आज पनि पेलेको छैन । सरकारले मलाई सहयोग गरेको छ । मसँग अहिले सिरिसय लगानीकर्ता आएको छ । म आफै सरकारलाई खोज्दै हिँडेको छु । वाणिज्य बैंकले ५० करोडभन्दा मैले ४० करोड दिन्छु भनेर त गए नि । म ऋण तिर्नको लागि तयार छु । उद्योग चलाउछु ।
तपाईंले ठ्याक्कै वाणिज्य बैंकलाई तिनुपर्ने ऋण कति हो ?
वाणिज्य बैंकमा मैले लिएको ऋण खासमा ९ करोड हो । त्यसपछि पुर्नतालिकरण गरेर ११ करोड रुपैयाँ लिएको थिए । त्यो लिएपछि मेरो उद्योगमा हावाहुरी आएर ३० करोडभन्दा बढीको घाटा गयो । त्यो बेला बीमा भएको थिएन । जसले गर्दा मलाई घाटा भयो । कृष्णभिरमा पहिरोको कारण ३८/३९ लाख अमेरिकी डलरका सामानहरु अड्किए । माओवादी द्वन्द्वको कारण मैले १ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर छुट दिनुपर्यो । ६७ लाख अमेरिकी डलर मैले त्यो बेला हवाइ भाडा मात्रै तिरेँ ।
चण्डीराजसँग २३ करोडको सम्पत्ति, तिर्नुपर्ने अर्ब बढी, असूलीको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउँदै बैंक
विश्व बैंकको व्यवस्थापन वाणिज्य बैंकमा आयो । उसले पुनसंरचनामा सहमति जनाएको थियो । तत्कालिन व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिले मेरो उद्योगको समेत भ्रमण गरेका थिए । उसले मलाई नेपालका सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरु बायस रहेको बताएको थियो । मलाई त्यो बेलापनि बैंकबाट लिएको ऋण विदेशमा लगेको आरोप लगाएका थिए । त्यो बेला उनले १ अर्बको लगानीको पनि उद्योग नबन्ने बताएका थिए । उद्योग अवलोकनपछि मलाई चाहिएको ऋण दिने आश्वासन दिएक थिए । उसले त्यो भनेपछि मैले ३० करोडको एलसी खोलेर सामान मगाएको थिए । त्यो बेलादेखि माओवादीको द्वन्द्व झनै बढ्यो ।
मेरो उद्योग चलेको बेला नेकोन एयर २ वटा फ्लाइट हरेक दिन चाटर्ड समेत गरे । आर्मीको पुमा हेलिकप्टर स्टाण्डबाई हुन्थ्यो ।
कुनैबेला सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याएर सरकारले लगातार सम्मान गरेको व्यक्ति । व्यवसाय असफल हुनुमा तपाईंको आफ्नो कति हात रह्यो र बाँकीको कस्तो भूमिका रह्यो ?
मेरो व्यवसायको डाउनफलको पहिलो कारण माओवादी द्वन्द्व नै हो । गार्मेन्ट भनेको सेन्सेटिभ प्रोडक्ट हो । यसमा भुक्तानी समयमा सामान डेलिभरी गरेपछि मात्र पाइन्छ । त्यसपछि छुट दिनुपर्छ । मेरो आफ्नो भूमिका १५ देखि २० प्रतिशत रह्यो । जति मैले त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने थियो । त्यो उद्योग वाणिज्य महासंघको राजनीतिका कारण गर्न सकिन । मसँग पुरा १०० जना विज्ञहरु थिए । म एक जमानामा व्यवस्थापनमा काम गर्नेलाई सबैभन्दा बढी तलब बाँढेको व्यक्ति हो । जुन बेला बैंकको सीइओले २ लाख तलब खाने खाँदैनथे, त्यो बेला मैले ५ देखि ६ लाखसम्म तलब दिएको थिए । त्यो व्यवस्थापनमा डिपेन्ड भए ।
त्यतिखेर वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पुनरसंरचना गर्ने भन्यो । अब साँच्चिकै भन्नुहुन्छ भने अनन्त पराजुली भन्ने व्यक्ति वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनमा आए । उसको कारणबाट पनि मलाई समस्या आयो । म अमेरिकामा थिएँ । उहाँले मेरो ५०/६० करोडको लिमिड बन्द गर्दिनुभयो । त्यो बेला ७ करोड डलरको माल अमेरिकामा इम्बार्गो लाएर बसेको थियो । त्यो बेला प्रकाशचन्द्र लोहनी परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केदारभक्त माथेमा परराष्ट्रसचिव हुनुहुन्थ्यो ।
म त्यो बेला २२ दिन अमेरिका बसेँ । २७ लाख अमेरिकी डलरको सामानमा ७ लाख डलरमात्र आयो । त्यो बेला बैंकले त्यो पैसा नतिर्दासम्म अरु एलसी नखोल्ने भनेर दियो । हामीसँग ७० लाख डलरको एलसी वाणिज्य बैंकमा थियो । हरेक एलसीबाट १० प्रतिशत काट्दै जानुभन्दापनि त्यो बेला ९ महिना निर्णय गर्न लगाउनुभयो । मैले तत्कालिन अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग भन्दा उहाँले ३० लाख डलरको एलसीमा १५ लाख डलर दिन्छु भन्नुभयो । १५ लाख डलरको एलसी खोलेर सामान आएपछि अर्को १५ लाख डलरको एलसी खोल्न २ महिना लाग्यो । त्यो लटमा मैले करिब २२ लाख डलर गुमाएँ । मेरो डिजास्टरको सुरुवात त्यहीँबाट भएको हो ।
२००३/४ सालतिरको कुरा हो । मैले बंगलादेश बैंकसँग कुरा गरेर ३० लाख डलरको एलसी खोले । त्यो बेला मेरो खरिदकर्ताले माल नपठाउने हो सामान नलिने बतायो । नेपालको बैंकिङको सिस्टमलाई यसरी बुझिन्छ- घाम पर्दा छाता दिने र पानी पर्दा छाता खोस्ने । मैले जापानी कम्पनी यिचुतीलाई भित्राएको थिए । त्यो बेला वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन हेर्न आएको व्यक्ति क्यान्सरको कारण बित्यो । मेरो सामान कलकत्तामा आएपनि यहा निर्णय नहुँदा २ महिनामा नै कलकत्तामा अड्कियो । त्यो बेला व्यवस्थापन हेर्ने ब्रुससँग कुरा गरेर ऋण ३० करोडमा पुर्नसंरचना गर्यौं ।
अहिले सबैले ३० करोड भनेको त्यही हो । कुनै बेला वाणिज्य बैंकमा १७/१८ प्रतिशत समेत ब्याजदर थियो । हामीले पछि कागज हेर्दा केही रकम मैले बैंकबाट लिनुपर्ने जस्तो पनि देखिएको थियो । मैले १ करोडको ऋणको समेत ३ करोड सम्मपनि तिरेको देखिएको थियो ।
मैले उद्योग चलाउदा ३३ सय महिला कर्मचारीकाम गर्थे । त्यसमा २२ सय स्नातक पढेका थिए । २/३ सय विदेशी थिए । मेरो साना उद्योग थिएन । मैले आयातको एलसी मात्र १ अर्बको खोल्ने गरेको थिए । बैंक ग्यारेन्टी जिरोमा समेत खुल्ने अवस्था थियो । त्यो कुरा सम्झने हो र मसँग मेरो कुरा सुन्ने हो मलाई अन्याय भएको भनेर भन्ने छन् । कतिपय व्यवसायीहरु भारत पलायन भए । म यही छु ।
कुनैबेला यो गार्मेन्ट व्यवसाय नगरेको भए खराब अवस्था आउने थिएन भन्ने लाग्दैन ?
मैले गार्मेन्ट नगरेको भए त्यो उचाईमा पुग्ने पनि थिएन । यो फास्ट मुभिङ व्यवसाय हो । यसमा ग्लामर पनि छ । मलाई अरुले त्यो ठाउँमा अरु व्यवसाय गरौं भनेका हुन्छन् । म आफु गार्मेन्ट नै गर्न चाहन्छु । गार्मेन्टभित्रको पेन पनि थाह छ । र, ब्युटी पनि थाह छ । यो सजिलो व्यवसाय भने होइन । यदि तपाईं ट्राभलमा इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा तपार्इं इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ । एक महिनामा २९ दिनमा तपाईं विदेशीसँग मात्र सम्पर्क राख्नुहुन्छ । यो पछिको कुरामा मैले सबै एड्रेस गरेँ । मलाई बैंकका सीइओहरुले भनेका थिए- यो २०/३० करोड किन तिर्नुहुन्छ ।
मैले वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी निर्यात गर्दा डलर कति दिए होला ? मैले अल्पकालिन ऋणको ब्याजदर कति तिरे होला, दीर्घकालिन ऋणको कति तिरे होला ? वाणिज्य बैंकले मसँग भन्दा कति गुणा कमाएको छ । मेरो प्रिन्सिपल एमाउन्ट भनेको ११ करोड मात्र हो । मैले ३५ करोड तिर्छु भन्न पनि गएँ । म अहिले ५२ करोड तिर्छु भनेर कागज गरेको थियो ।
तपाईंले अब कति समयमा वाणिज्य बैंकको ऋण तिर्नुहुन्छ ?
मैले वाणिज्य बैंकमा कागज गरेको छु । मसँग लगानीकर्ता पनि यहाँ लगानी गर्नका लागि तयार छ । कुन मोडालिटीमा जाने भनेर निर्णय पनि गरेको छु । मसँग लगानी गर्छु भनेको मान्छे ३ वर्षदेखि कुरेको छ । उसले यहाँ आएर गभर्नरलाई पनि भेटेको छ । सीइओलाई भेटेको छ । वाणिज्य बैंकका सीइओ किरणकुमार श्रेष्ठ धेरै नै सकारात्मक पाएँ । उहाँले यसलाई सल्टाउन खोज्नु भएको छ ।
मैले सुरुमा ३५ करोड सम्म तिर्ने अफर गरेको थिएँ । त्योभन्दा हामी अगाडि गएर ५० र ५२ करोडमा तिर्न तयार छु । सुरुमा टोकन मनिको रुपमा ८ देखि १० करोड तिर्ने हो । ५ वर्षभित्रमा सावाँ र ५ वर्षभित्रमा ब्याज तिर्ने बिजनेश प्लान दिएको छु ।
४ महिनामा उद्योग चलाउँछु । उद्योग चलाएपछि कमाइ हुन्छ, त्यसले ऋण तिर्छु । अब बन्द भएको कम्पनीलाई ब्याज जरिवाना लगाएर ठूलो रकम छ भन्न मिल्दैन ।
गार्मेन्ट व्यवसायमा अहिले विश्वमै तीब्र प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो अवस्थामा फेरि डुबेको गार्मेन्ट उद्योग व्यूताउँछु र चलाउँछु भन्नुहुन्छ । तपाईंको कुरालाई के का आधारमा विश्वास गर्ने ?
मेरो व्यवसाय बिजनेश नपाएर बन्द भएको होइन । मेरो जुन खरिदकर्ता आएको त्यो खुसी भएर गएको थियो । टाइम डेलिभरी गर्न नसेको कारण म समस्यामा परेको हो । त्यो बेला एक महिनासम्म नोपल बन्द भएको थियो । मैले हेलिकप्टर र प्लेनबाट समेत सामान पठाएको छु । गार्मेन्टबाट नै गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ ।
बिजनेशको असफलतालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
त्यो अवस्थामा मेरो उद्योगको उत्पादन क्षमता ३ लाख पिस थियो भने मैले २ लाख पिस मात्र उत्पादन गर्नुपर्ने थियो । मसँग टप क्लासको व्यवस्थापन थियो । मैले यो महिना डेढ करोड घाटा भयो अब रातदिन उत्पादन गरौं भनेर थप उत्पादन गर्ने नीति नै अन्तत गलत भयो । आजको मेरो उद्योग डेढ अर्बको लगानीले पनि खुल्दैन ।
सफलताको शिखरमा पुगेको तपाईं असफलताको सडकम झर्नु भएको छ । बैंकको ऋण तिर्न नसकेका कारण कालोसूचिमा पनि पर्नु भएको छ । चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेको छ । कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
तपाईंले भनेको सत्य हो । कुनैबेला नेपालको अर्थतन्त्र मैले चलाउने गरेको थिए । नेपालले गर्ने कुल निर्यातमा २७ प्रतिशत हिस्सा मेरो थियो । यो अवस्थामा आउँदा कता कता असहज स्थिति हुन्छ । म एउटा कारणबाट नै जिउन सक्ने आधार भनेको मेरो नियत खराब छैन । मैले अरु बैंकको करिब २ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छु । अब मेरो समस्या भनेको वाणिज्य बैंकको मात्र हो ।
केही पटक त बिजनेशमा भएको असफलताले डिप्रेशन पनि भयो । तर, बलियो आत्मबल भएकाले सम्हालिन सकेँ । म समस्या सल्ट्याउन लागेको छु । त्यो उद्योगलाई चलाउँछु भन्ने इच्छाशक्तिमा नै भएको हो ।
मैले आफ्ना समस्या समाधान गर्दैछु । जुन देशमा १० वर्ष माओवादीको द्वन्द्व भयो । त्यसपछि संविधान बनाउनको लागि १० वर्ष लाग्यो । भूकम्प र नाकाबन्दी भयो । यो समस्या चण्डीराज ढकालले गर्दा भएको होइन । ५० करोड डलर भित्र्याएको गार्मेन्ट, कार्पेट र पश्मिना क्षेत्र धरासायी भयो ।
हिँजो बनस्पती घिउ,यार्नबाट रातारात करोडपति भएका व्यक्ति कहाँ गए ? उनीहरुको नाम पनि छैन । मसँग हिँजो बढी निर्यातकर्ता हुनुभन्दा बढी आज मेसिन छ । मैले आइटिसीसँग मिलेर जोन प्लेयर जस्ता ब्राण्डलाई यहा भित्र्याउन मद्दत गरे । चारैतिरबाट प्रहार हुँदा असहज अनुभव गर्नु स्वभाविक हो ।
तपाईंसँग फेरि उद्योग चलाउने प्रष्ट आधार र योजना के छ ?
योजना भएर नै म बैंकमा गएको हो । मसँग लगाानी गर्छु भन्ने लगानीकर्ता छ । मसँग सम्पत्ति छ । उद्योग छ । म उद्योग चलाउन सक्छु । मसँग अहिले लगानीकर्ता लगानी गर्नको लागि तयार छ । विदेशी लगानीकर्ता आएर देशको लागि फाइदा हुने हो । मसँग ५ हजार करोडको व्यापार गरेको लगानीकर्ता आउन लागेको छ । बन्द भएको उद्योग लिलामीमा जाँदा २० करोड रुपैयाँ पनि आउँदैन । भोलि चल्यो भने ५० करोडभन्दा बढी लगानी छ ।
मैले रिलायन्ससँग कुरा गरेको छु । दुबईको पर्फेक्ट ग्रुपसँग कुरा भएको छ । अर्को राज भन्ने मद्रासको । अर्को रविचन्द्र भन्ने भारतको । थोमस् भन्ने लगानीकर्ता आएको छ । मैले त्यो सम्झौता पनि बैंकमा पेश गरिसकेको छु । मैले चाहे अनुसार काम भएको भए यतिबेलासम्म १ करोड डलरको निर्यातसमेत गरिसक्ने अवस्था हुने थियो ।
कहिलेसम्ममा तपाईको उद्योग चल्छ ?
जुनदिन बैंकले निर्णय गर्छ । त्यसको ४ महिनाभित्रमा उद्योग चल्छ । बैंकको निर्णय जति छिटो भयो त्यति नै छिटो उद्योग चल्छ ।
बैंकले के निर्णय गर्नुपर्ने हो ?
बैंकसँग विभिन्न खाले हामीले प्रपोजल हालेका छौं । ऋणको पुनसंरचना गर्नुपर्ने छ । वाणिज्य बैंकलाई निश्चित रकम तिरेपछि एलसी खोल्न कसरी दिने ? त्यसको लागि शुरुमा १० करोड राख्न तयार छु । ननफण्डेड लिमिटको क्लियर आउन बाँकी छ । कोरोनाका कारण प्रक्रिया लम्बिन सक्छ । चैतमा निर्णय गराएर उद्योगलाई ४ महिनासम्म चलाउने मेरो तयारी थियो ।
एफएनसीसीआईका क्रियाकलापमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै तपाईंको आलोचना भइरहन्छ । चण्डीराज ढकाल एफएनसीसीआई नभई बाँच्नै सक्दैन हो ?
उहाँहरुलाई चाहिँदा म दुधले धोएको हुने । चण्डी दाई मलाई केही पनि थाह छैन भन्दै आउने । अनि चुनाव जितेपछि म बिग्रेको हुने ? ऋण तिर्न नसकेको हुने ? मैले नै उहाँहरुलाई चुनाव जिताएको होइन र ? त्यो कुरा बिर्सनु त भएन नि ।
मेरो बुई चढेर कोही मान्छे कुर्सीमा पुग्छ अनि मैले दाइजो ल्याएको भनेर भन्छ भने म त भिड्न तयार हुन्छु । आज केपी शर्मा ओलीले कसैलाई मन्त्री बनाउनुभयो, अनि मन्त्री बनाएपछि त्यो मन्त्रीले मैले प्रधानमन्त्रीका कतिवटा काम गर्दिएँ भन्न मिल्छ रु उसलाई काम गर्ने अवस्थामा कस्ले लगेको ?
अरु पूर्वअध्यक्षहरु चाहीँ चुप लागेर बस्न सक्ने तपाईंचाहीँ कहिले विशिष्ट, कहिले विधान समित, कहिले के, कहिले के पद नभइ नहुने ? यो त अलि सुहाएन नि ?
महेशलाल श्रेष्ठ र पदम ज्योतिको पालामा पनि बिनोद चौधरी हाबी भएका थिएन । खै को बोल्यो त्यो बेला ? रविभक्तजी, महेशलालजी, पशुपतिजी, कुशजी, सुरजजी नै हाबी हुन आए भैगो नि । अरु पूर्वअध्यक्षहरुलाई मैले वा अरु कस्ले भनेको छ महासंघमा नजाउ भनेर रु उहाँहरु पनि लाग्नुहोस्, आफ्नो टिम जिताउनुहोस् ।
महासंघको चुनावी अंकगणितमा निकै प्रभावशाली हुनुहुन्छ । तपाईंसँग चुनावी नतिजा प्रभाव पार्नसक्ने तागत छ । ठ्याक्कै भन्नुस् न तपाईंले जहाँ भन्यो त्यहीँ भोट हाल्नेको संख्या कति छ ?
जिल्ला नगरमा हेर्ने हो भने मैले भन्दा साथीहरुले मलाई विश्वास गरेर भोट हाल्नेहरुको संख्या ५५ देखि ६० प्रतिशत छ, जसले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । मैले सहयोग गरेको टिम ल्याउँछु भन्ने आशा छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुले सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नका लागि पहल थालिसकेका छन् । देशको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । तपाईं चाहीँ सहमतिबाट नेतृत्व ल्याउने पक्षमा हो कि होइन ?
ढकालले ४ जना मान्छे बसेर निर्णय गर्नासाथ त्यो लागू हुँदैन । म पनि पूर्वअध्यक्ष हुँ । तर सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म मलाई कसैले भनेको छैन ।
चुनाव गर्ने कि नगर्ने र चुनावलाई एउटा लेभलमा प्रधाव पार्नसक्ने व्यक्ति हामीहरुसँग कुनै छलफल नै छैन, अनि उहाँहरुले कोठामा बसेर गरेको कुराले पूर्णता पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, साथीभाइहरु चुनावका लागि धेरै अघि बढिसकेका छन् ।
पूर्वअध्यक्षज्यूहरु कहीँ न कहीँ आफूलाई चुनावमा सक्रिय गराउन चाहनुहुन्छ । सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने मुद्दा पनि त्यति मात्रै हो । कस्को लागि सहमति गराउने रु एउटा व्यक्तिको लागि रु कि समग्र टिमको लागि रु जुन कुरा संभव छैन ।
बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै अघि बढ्छौं, नेकपाको विवाद देखेर लाज लाग्छः अर्थमन्त्री
कामका लागि हैन नतिजाका लागि काम गर्छौ
आर्थिक वृद्धिदर शून्य हुनसक्छः डा. प्रकाश श्रेष्ठ